Filtrer les éléments par date : mercredi, 27 mai 2020
mercredi, 27 mai 2020 15:28
Fianarantsoa: Nanomboka androany ny fizarana ny « Tosika Fameno »
Nanomboka androany ny fizarana ny « Tosika Fameno » ho an’ny Distrikan’i Fianarantsoa. Miara-misalahy amin’ny fizarana, manaraka ny fepetra sy toromarika mihatra amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao, ny Faritra Matsiatra Ambony, ny Kaominina ambonivohitra Fianarantsoa, ny Fokontany, ny FID, ny Oniversiten’i Fianarantsoa, ny Fitaleavam-paritra miadidy ny mponina, ny Fahasalamana, ny Paositra Malagasy, ny AGEX ary ny Mpitandro filaminana.
Haharitra 15 andro izao fizarana ny « Tosika Fameno » izao eto amin’ny Distrikan’i Fianarantsoa, ka ny Firaisana Lalazana sy Vatosola no nanombohana izany tamin’ity androany ity.
(Loharanom-baovao: Governoran’ny Faritra Matsiatra Ambony)
Tsy raikitra fisokafan’ny tsenan’ny lavanila taty Ambalavelona sy Ambalahonko, Distrika Ambanja omaly Talata 26 may 2020. Nitaky 200 000 Ariary ny mpamboly, ny mpividy anefa tsy resy lahatra ka tsy nanoratra ny vidy ividianan’izy ireo ny kilaon’ny lavanila, ka tsy nisy marimaritra niraisina. Rava tsy nisokatra ny tsena.
mercredi, 27 mai 2020 15:04
Ambatovy: Fiaramanidina miisa telo no naka ireo mpiasa teto Toamasina
Nianga androany teto Toamasina ireo ny vazaha mpiasan'Ambatovy. Fiaramanidina miisa telo an’ny Tsaradia, sakelika ao amin’ny kaompania Air Madagascar, no naka azy ireo teto Ambalamanasa niazo an’Antananarivo, ao indray izy ireo no mandray ny sidina manokana mankany ivelany.
Ny roa tamin’ny maraina, dia iray ny atoandro teo. Mpandeha miisa 94 isaky ny sidina izy ireo, nombam-bady aman-janaka hatramin’ny maraina.
mercredi, 27 mai 2020 12:01
Trangam-piarahamonina: Vehivavy Malagasy miisa 575 isan-taona no maty noho ny fanalan-jaza
Nivoitra io nandritra ny tatitra ny zava-bita nandritra ny taona 2019 nataon’ny Vaomiera-pirenena mahaleotena misahana ny zon’olombelona CNIDH notarihin’ny Filohany Rabenoro Mireille teto amin’ny Antenimierandoholona ny talata 26 Mey 2019.
mercredi, 27 mai 2020 09:47
Bois de rose: Mangetaheta ambony lakana, amono sa amelona?
Madagasikara dia mirakitra 80-90% n'ireo zava-maniry na biby manokana ho azy maneran-tany (Faunes et flores 80-90% d’espèces endémiques), tafiditra ao anatin'izany ny Bois de rose na Andramena.
Inona tokoa moa ity karazan-kazo ity, ary nahoana no harovana fatratra.
Misy ny Andrapotsy, izay mitovy sokajy amin'ny Andramena ihany, fa izy fotsy ny lokony, fanaovana seza sy fanaka, nefa tsy mahasarotiny. Izy ireny ampiasain'ny IKEA ireny, izay hiadivantsika hovidiana andravaka ny biraom-panjakana sy ny any antokatrano fanaka malama fotsy na lokoina vernis mena ireny.
Misy kosa ny Andramena na Bois de rose, izay nosakajiana tao anatin'ny hazo kitay, mena ny ao anatiny.